Madaxda Garabka Jowhar iyo Gobolka bari oo ku heshiiyey iney qeybsadaan hantida laga helo shirkadaha shidaalka ka baaraya gobolka Bari
Buluugleey, Saturday, October 08, 2005
Wafdi ka socdey Bossaaso oo beryahan ku sugnaa degmada Jowhar ayaa waxey shir qarsoodiya la galeen madaxda garabka Jowhar ee uu hogaaminayo Col. Cabdullahi Yusuf. Wafdigaas oo ay u badnayeen dalaaleey ka wakiil ah ganacsatada iyo maamul beeleedka ka jira gobolka Bari ayaa waxey wada xaajood gaara la fureen wakiilada ka soo jeeda gobolkooda ee ku sugan magaalada Jowhar.
Garabka Jowhar oo ah qeyb ka mida, kana soo go’day maamulkii lagu soo dhisay Kenya ayaa horay ugu soo jeediyey eed maamul beleedka ka dhisan gobolka Bari. Waxaana raga horkacaya maamul gobeleedkaas lagu eedeeyey in si u gooniya heshiisyo qalada ay u la galeen dowlado shisheeya iyo shirkado ajnebiya oo ay tahay iney dowlada dhexe oo keliya xaq u leedahay iney gasho heshiisyada nuucaasa , welibana uu ansixiyo golaha baarlamaanka.
Madaxda garabka Jowhar ayaa sidii madax ka timid wadan shisheeye oo kale si heer sare leh u soo dhaweysey wakiiladii uga yimid dhinaca Bari, xili magaalada Jowhar shaqsiyaad ka soo jeeda Xamar madaxa looga xiirayey oo sharaf dhac lagula dhaqmayey.
Waxey madaxda grabka Jowhar marxabeynta kadib wadahadal hoose la gashay wakiiladaas. Kadibna waxey si dhaqso leh u soo saareen hadal wada jira oo ku dhawaaqayey in arrintii dhalisay khilaafka la iska afgartay iyadoo wax faahfaahina aan loo soo bandhigin dadweynaha Soomaaliyeed.
Wakiilada ka yimid gobolka Bari oo boqasho xigtanimo ugu yimid siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaas oo hadda ay xaruun u tahay degmada Jowhar ayaan muujin iney diyaar u yihiin iney gorgortan ka galaan gooni u daaqa ay ku jireen sannooyinkii dambe . Ragaas ayaa waxey wateen hindiso ay ku doonayeen in loogu dhameeyo gooni u isticmaalka kheyraadka gobolka Bari ku keydsan. Waxaa jira warar tilmaamaya in la aqbalay codsigooda, lagana yeelay ragas in si hoose loogu dhameeyo arrintooda.
Prof. Geedi ayaa war ka soo baxay wuxuu sheegay in la is waafajinayo axdiga qaranka iyo kan Bari. Laakiin, warar hoose oo laga helay labada dhinac ayeysan ka muuqan in arrimahaas laga wada hadlay ama laga gaarey wax heshiisa oo raacsan qanuunka adduunka u degsan wadan madaxbanaan iyo axdiga guud ee uu ku soo dhisnaa dalka Soomaaliyeed, taasna ay tahy mida sababtay in war rasmiya laga soo saari waayo dhamaadka kulankaas. Laakiin, waxaa iska cad in murankii u dhaxeeyey wakiiladii ka socdey gobolka Bari iyo madaxda garabka Jowhar ay dhamaatay, kuna soo gabagaboowdey iyaga oo si hoose ugu heshiiyey iney qeybsadaan wixii dhaqaala oo laga helo shirkadahaas shidaalka ka qodaya gobolka Bari.
Heshiiska ayaa laga leexiyey mariinkiisa iyo arrintii dhalisay khilaafka oo salka ku heysey ineysan gobolada dalka aysan wax heshiisa la geli karin wadamada shisheeyaha iyo shirkado ajnebiga, kuwaas oo ay tahay howl ay iska leedahay dowlada dhexe. Waxaa doodii dhalisay muranka loo jeediyey dhinaca axdiga gobolka Bari, taas oo aysan meesha joogin doodeedu, waayo dowlad dhexe nidaam goboleed ay wax ka dhistay oo gobolada ka socda ma jiro, marka axdigooda in hadda laga doodo waa arrin mariin habaabina.
Waxaa muuqata in heshiiskii loo rogay mid shaqsi iyo mid kooxeed, kaas oo ogolaaday in loo dhameeyey gobolka Bari inuu ku saxsanaa heshiiskii uu la galay shirkadaha shisheeye, garabka Jowharna uu siiyey ruqsadihii iyo waraaqihii cadeynayey heshiiskaas kadib markii wakiiladu ogoladeen in siyaasiyiinta Jowhar iyaguna ay sidaas ku helayaan qeybta looga soo qoondeeyo hantida ka soo gasha shirkadahaas.
Hadda ka hor ayey marar badan dhacday siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Bari sida Xasan Abshir, Cabdullahi Yuusuf, Cabdirisaaq Xassan Juriile iyo Maxamed Abshir Haamaan iney heshiisyo gooniya la galeen shurkado shisheeye oo daldalanayey kheyraadka xeebaha Soomaaliyeed, sidaasna ay ku helaan dhaqaale iyaga u gooniya
Gobolka Bari oo ah gobolka dalka Soomaaliya ugu saboolsan oo leh kheyraad aan ka baxsaneyn kaluunka bada ayaa weligiis wuxuu culaab weyn ku hayey dhaqaalaha canshuurta ka soo gala dowlada dhexe oo ummadda Soomaaliyeed laga soo uruuriyo. Heshiiskaas sooma uusan hadal qaadin inta ay gaarsiisnaan doonto isku filnaashaha ay gooni uga istaagayaan ummadda inteeda kale wakhti uusan jirin dowlad dhexe oo maamusha gobolada dalka. Arrintaas waxey tilmaameysa sida garabka Jowhar ay u daneynayaan xoolo ay shaqsi ahaan uga helaan magaca Soomaaliyeed iyagoo aan dan ka lahyn ummadda ku nool gobolada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Hadda ayey ceeb ka taagan tahay madaxda garabka Jowhar oo la soo sheegay iney guryo ka gateen magaalada Nairobi iyo iyagoo lagu eedeynayo iney lacagtii loogu soo dhiibey shacabka Soomaaliyeed ay ku shubteen xisaabtooda gaarkaa ee uga furan dalalka shisheeyaha, taas oo dhiilo weyn gelisey deeq bixiyeyaasha caalamka oo arrimahaas ku howlan daba galna ugu jira baaritaankooda.